Manchester City Oo Guul Ay Ka Gaadhay Crystal Palace Ugu Sii Dhowaatay Koobka Horyaalka Premier League - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaManchester City Oo Guul Ay Ka Gaadhay Crystal Palace Ugu Sii Dhowaatay Koobka Horyaalka Premier League
Manchester City Oo Guul Ay Ka Gaadhay Crystal Palace Ugu Sii Dhowaatay Koobka Horyaalka Premier League
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa guul waqti dambe ay u dagaallantay kasoo gaadhay Crystal Palace oo ay ugu tagtay Magaalada London, waxaanay saddexaas dhibcood usii dhoweeyeen hanashada horyaalka Premier League.
Manchester City ayaa 2-0 ku garaacday Crystal Palace, waxaanay hoggaanka ku qabatay 13 dhibcood oo ay ka horreyso Manchester United oo kaalinta labaad ku jirta, xilli afar ciyaarood oo kali ahi uga hadhsan yihiin xilli ciyaareedkan oo lasoo gabogabaynayo bishan May ee aynu ku jirno.
Sergio Aguero oo xilli ciyaareedkan intiisa badan dhaawac ku qaatay, isla markaana ka bixi doona City bisha June ee foodda inagu soo haysa ayaa goolka hore u saxeexay Manchester City daqiiqaddii 57aad ee qaybta labaad ee ciyaarta, waxaanu shabaqa ku hubsaday kubbad uu soo gaadhsiiyey difaaca bidix ee reer France ee Benjamin Mendy.
Laacibka reer Spain ee Ferran Torres ayaa laba daqiiqadood oo kaliya kaddib goolka labaad u dhaliyey Man City, waxaanu koornaha goolka Crystal Palace ka geliyey kubbad uu ka helay xerada ganaaxa dhexdeeda, waxaanu ciyaarta ka dhigay 2-0.
Tababare Pep Guardiola oo kasii fikirayay ciyaarta Champions League ee semi-finalka lugtiisa labaad ay Salaasada la ciyaari doonaan PSG ayaa waxa uu isbeddel badan ku sameeyey safkiisa, isagoo kaydka dhigay siddeed laacib oo muhiim ah oo ciyaartii hore dheelay, waxaana kaliya safkii uu PSG kula ciyaaray uu kasoo reebay Cancelo, Ederson iyo Rodri, halka intii kalena uu wada nasiyey.
Crystal Palace ayaa heshay laba fursadood oo ay goolal ku dhalin karaysay qaybtii hore, waxaase Manchester City ay iyaduna heshay jaanisyo qaali ahaa.
Gabriel Jesus iyo Raheem Sterling ayaa jaanta isla helay markii ay kooxdoodu hoggaanka qabatay, waxaana kubbad uu laacibka reer Brazil u taraarixiyey Raheem uu ku ganay goolka, taas oo dhaaftay goolhaye Guaita balse birta kusoo dhacday, waxaanay waxyar kaga baxsatay Torres oo ku dhowaa in uu ku celiyo.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 2-0 ay guushu ku raacday Manchester City oo hoggaanka horyaalka ku qabatay 80 dhibcood, waxaanay 13 dhibcood ka horreysaa Manchester United oo kaalinta labaad fadhida, berri oo Axad ahna la ciyaari doonta Liverpool.